Isticmaalka AirPlay mid muraayad shaashadda ee Device macruufka ah ama Mac la TV Apple . Waxay noqon kartaa mid waxtar leh haddii aad rabto inaad la wadaagto aad bandhigay oo ay ku jiraan sawirrada, filimada iwm oo aad saaxiibadaa iyo qoyskaaga shaashad weyn. Waa in aanu si aad ugala hadasho sida aad u isticmaali kartaa VLC Media Player iyo AirPlay si wadajir ah u ciyaari videos ilaaliye screen waaweyn sida TV smart ama TV Apple.
Fur video isticmaalaya VLC Media Player on your computer in aad jeclaan lahayd inaad sii qulquli badan AirPlay.
Hadda tagaan dhanka gacanta midigta sare ee desktop Mac guji icon in eg TV in la furo liiska dropdown ah qalabka ku xiran oo dhan ah oo ay doortaan TV ka codso aad jeclaan lahayd inaad sii qulquli video ay u.
Hadda, waxaad tagtaa meel audio ee VLC Player adigoo riixaya batanka Audio ee sare ee dhinaca bidixda ee shaashada oo ka menu dropdown ah, guji Device Audio in la furo dhammaan tallaabooyinka la heli karo. Hubi AirPlay in la doorto in liiskan. Tani waa lagama maarmaan si loo hubiyo in codka video la buriyay dhex TV Apple ah in aad isticmaali doonaa.
Dooro goobaha video aad jeclaan lahayd in ay isticmaalaan si ay u ciyaari video la. Tag Video button saxda ah ee soo socota si ay u button Audio in aad hore u heli dooro hab video ah halkan ka. Fullscreen noqon doorasho lagu taliyey lahaa.
Q. VLC on AirPlay ciyaara cod laheyn! Marka ciyaaro video la VLC iyo Air Play mirroring in TV Apple, video ciyaara iyada oo ganaax TV laakiin audio sii wadaan in ay ku ciyaaraan ee ku hadla Mac marayo.
A. Taasi waxay dhacdaa marka doorasho ee AirPlay hoos Device Audio> Audio aan karti aad Mac, si fudud loo hubiyo in aad ka maqnaan ma soo baxay Tallaabada 3 sidii la siiyo kor ku xusan inta u fidinno VLC dhex AirPlay.
Q. Waxaan qulquli karaa wax video ciyaaray VLC ciyaaryahan si TV Apple?
A. Haa, inkastoo Apple TV horayn taageertaa .mp4 iyo .m4v, waa in aad awood u ciyaaro ku dhowaad dhammaan noocyada file video dhex VLC Player on TV Apple noqon.
Q. Maxaa dhacaya haddii VLC ma ciyaari karo DVD ama videos?
A. Waa hagaag, haddii aanad awoodin in uu ciyaaro video iyo dvd isticmaalaya VLC iyo AirPlay gaar ah, ka dibna waxaan ku leeyihiin kale oo la yaab leh in aad waayo, Wondershare Video Converter Ultimate. Waxaa gebi ahaanba la jaan qaada Apple TV iyo streamers badan warbaahinta kale oo smart telefishin oo loo isticmaali karaa si fudud u sii qulquli nooc kasta oo ah video / DVD. Waxaad raaci kartaa link ah sida hoos ku siiyo si ay u tijaabiso lacag la'aan ah.
Q. Waxaan soo jeesanno off Bluetooth si uu u xaliyo beddeli kara AirPlay video in OS X?
A. Waa hagaag, dad badan ayaa ka soo maray arrimaha isku xirnaanta iyadoo la isticmaalayo AirPlay ay la TV, inta badan beddeli kara, sawirada guurto ah ama la barafeeyey ugu danbeyn keentay in xiriir is de'een jeer. Apple ayaa waxa uu qiray in arrintan oo ka shaqaynayso xal u ah cayayaanka taasi si kastaba ha ahaatee waqti hoose, damiya / curyaamo qalab ee Bluetooth radio ayaa dhab ahaan lagu muujiyey qaab hagaagtay kiiskan.
Top 5 Free Online MKV in AVI Converter
> Resource > Video > Sidee u ciyaaro aad videos in VLC la AirPlay